Boko Haram oo looga shirayo London - BBC News Somali
Boko Haram oo looga shirayo London
Image caption Hogaamiyaha Kooxda Boko Haram iyo ilaaladiisa
Wasiirada arrimaha dibadda ee Nigeria iyo dalalka deriska la ah ayaa maanta shir uga furmayaa magaalada London. Wasiiradan ayaa ka wadaxaajoonaya sida looga hortagi karo kooxda weerarada ka geesatad dalka Nigeria ee Boko Haram.
Shirka oo uu marti gelinayo xoghayaha arrimaha dibadda ee Brittan (William Hague), waxa uu daba socdaa kullankii lagu qabtay Fransiiska ee looga hadlaayay ammaanka dalka Nigeria, oo ay ka qeyb galeen Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan, iyo madaxda dalalka Niger, Cameroon, Chad, iyo jamhuuriyadda Benin.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo wadamada barwaaqa sooranka ayaa laga soo xigtay inuu mr Hague yiri, kullanka heerka wasiirada ee London ee arrimaha ammniga waqooyiga dalka Nigeria inuu adkeynayo heshiisyadii Paris iyo arrimo kale oo lagula dagaalamo kooxda islaamiga ee waqooyiga Nigeria ka dagaallanta.
Arrimahaasi waxaa ka mid ah in la wadaago xogta ay uruuriyaan hay'adaha sirdoonka, in laga wada shaqeeyo ilaalinta xuduudaha, iyo in la bilaabo qorsho wadajir ah oo “argagixisada” lagula dagaalamayo.
Tallaabooyiinka kale ee la filayo in shirka laga soosaaro waxaa ka mid ah taageero loo fidiyo dhibanayaasha la kufsaday iyo xoojinta awoodda haweenka iyo gabdhaha.
Dalalka reer galbeedka ayaa Nigeria ugu yaboohay taageero dagaalkeeda ka dhanka ah “argagixisada” oo dunida oo dhan hadda u soo jeesatay kadib markii Boko Xaraam ay bishii April ay afduubatay in kabadan laba boqol oo gabar oo iskuuley ah.
Si loo adkeeyo xiriirka gobolka, madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande waxa uu qaban qaabiyay kullankii Paris. Horraantii bishanna dalka Cameroon-oo dowladda Nigeria ay ku eedeysay inaysan qaadin tallaabo caawimaad buuxda ah oo lagula dagaalamo Boko Haram ayaa qiyaastii 1,000 askeri geysay xuduudeedeeda dhinaca waqooyi ee ay la wadaagto waqooyiga Nigeria, halkaas oo la soo sheegayo inay ku dileen 40 ka tirsanaa kooxdan.
Shirka ay yeelanayaan wasiirada arimaha dibadda ee Nigeria iyo dalalka deriska la ah ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan wakiilo ka socdo Brittan, Mareykanka, Faransiiska, Canada iyo Midowga Yurub.